È Nwere Atụmatụ Maka Twitter SEO?
Na 2017, SEO aghọwo ọwa ahịa ahia. Taa, njikwa njikwa search engine abughi nani inweta ihe ndi choro site na engines enyocha. Maka ịmatakwu ihe SEO dị, ị ga-ebu ụzọ ghọta ụzọ ndị mgbasaozi mgbasa ozi si emetụta SEO.
E gosipụtaworị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-abụ akụkụ dị mkpa nke ogo ogo weebụ. Nkwekọrịta mmekọrịta nwere ike ọbụna iweli elu ebe obibi gị SEO.
Ọ na-arụ ọrụ dị ka ndị a: ọnụ ọgụgụ obodo gị na njikọ aka ya bụ ihe dị mkpa maka uru na ogo gị.Ihe ọzọ, ọdịnaya site na mgbasa ozi ọha na eze na-egosipụtakarị na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ọ bụ ya mere nnukwu, na-eche banyere Twitter na-esote na itinye aka na ngwaahịa gị dị nnọọ uru maka azụmahịa gị.
Ya mere, taa, ndị ọkachamara dị elu ga-agwa gị gbasara ndụmọdụ kachasị mma maka njirimara SEO gị Twitter. Tinye ha n'ọrụ ka ị na-eto eto na azụmahịa gị.
SEO SEO dị mkpa Ị Kwesịrị Ịma
1. Ịzụlite Twitter SEO Strategy
Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịmepụta atụmatụ nke ọma. Dị ka usoro, usoro na-amalite site n'ebumnobi n'ozuzu. Kọwaa ihe mgbaru ọsọ gị bụ isi site na ịchọpụta ụdị nsonaazụ ndị ị na-atụ anya iji Twitter maka ahịa. Ma eleghị anya, ị na-agbalịsi ike ịkwalite àgwà ịmara, na-ere ọrụ ọhụụ ma ọ bụ na-amụba okporo ụzọ okporo ụzọ?
Ozugbo e mere gị iji chọpụta ebumnobi gị, nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ma nwalee usoro kachasị mma maka iru ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ.
2. Ilekwasị Anya n'olu nke Egwurugwu
Buru n'uche: ihe ọ bụla tweet gosipụtara gị ika. Ọ bụ ya mere gị posts tweet kwesịrị ịdị na-ekwesị ntụkwasị obi n'olu olu gị, na-anọchite anya njirimara gị. Jide n'aka na ha na-arịọ ndị na-ege gị ntị.
Ihe ọzọ dị oké mkpa na-edezi - dezie tweet gị ọ bụghị naanị maka mbibi kama ọ bụrụ na ị bụ 100% jide n'aka na tweet ọ bụla na-egosipụta nhọta ọ bụla ịchọrọ ịkọrọ ndị ahịa.
3. Ịga n'ihu na-eto eto
Ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka ọ ghara ịba. Otú ọ dị, mgbe ọ bịara na Twitter, aka bụ eze. Mee ka ndị na-eso ụzọ kere òkè gị, ma gbalịa izere ụzọ aghụghọ - ha anaghị adaba ego ahụ.
Kama ịmalite bọmbụ na-agagharị ma mee ka ọ na-agagharị site na itinye aka abụọ: ndị na-eso ụzọ ugbu a na ndị nwere ike. Malite site na ịmepụta ihe bara uru ndị mmadụ chọrọ isoro na ịkekọrịta. Ihe ọzọ bụ ịzaghachi - zaa ajụjụ na ihe ndị mmadụ jụrụ, zaa ya na tweet. Echefukwala ihe ọ bụla a kpọtụrụ aha, na-agbakwụnye ihe ndetu gị.
4. Ịhọrọ Ụkpụrụ Kwesịrị Ekwesị
Ọ dị oké mkpa ime ka ọdịnaya gị dị mfe ịchọta. I kwesiri ileghari anya na Twitter dika nyocha ọ bụla. Gbalịa iji mkpụrụokwu dị mkpa n'ime otu tweet. Echefula banyere hashtags, bio, na captions - ha nwekwara ike nyere aka na ibe Twitter.
Cheta, n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ na-enyocha Twitter maka isiokwu. Ya mere, hụ na akaụntụ gị gosipụtara ihe dị mkpa maka azụmahịa gị.
5. Nyochaa okporo ụzọ Twitter gị
Dị ka ha na-ekwu, ihe na-adịghị arụ ọrụ anaghị eto. Ịgabeghị etinye nchịkọta Twitter? Mgbe ahụ, ị ​​ga-agakwuru nke ahụ ngwa ngwa ka o wee nwee ike ịchọta foto ozugbo banyere otu ị na-esi eme ya ma soro usoro izu ụka gị kwa izu.
Nchịkọta Google nwekwara ike ịgwa gị ọtụtụ akwụkwọ nleta ị na-enweta na Twitter. Ihe ọmụma a ga-enye gị mmetụta nke ole ị ga - esi azụ ahịa na Twitter.
Dị ka anyị si mara, Twitter bụ ebe juru ebe niile. Mepụta ozi ndi ga - eme ka i guzosie ike na mpi. Mee ka ọdịnaya gị bara uru ma dị mfe ịgụ. Karịsịa, mee ka ọ dị mkpa ma baa uru, n'ihi na ọ bụ otú Twitter SEO na-arụ ọrụ Source .